Harder & Steenbeck: teknolojia vaovao ho an'ny fanjaitra matanjaka kokoa
Harder & Steenbeck dia vao haingana no namatsy vola be tao amin'ny trano fanamboarana azy tao Norderstedt, Alemana. Ny milina CNC teknolojia vaovao telo lehibe indrindra tamin'ity taona ity dia tsy vitan'ny nampitombo ny fahaizany manamboatra, fa nanokatra làlana vaovao ho an'ny famolavolana vokatra, ary ny fampandrosoana.
Ny milina sy ny milina CNC vaovao dia mameno ny milina efa misy ankehitriny izay anamboarana ny fiaramanidina Harder & Steenbeck, raha toa kosa milina faran'izay manamboatra milina faran'izay vita aza no ampiharina amin'ny ampahany rehefa vita ny milina.
Fa ny unit izay manome tombony lehibe indrindra ho an'ireo mpampiasa Harder & Steenbeck dia ilay milina fanjaitra CNC vaovao. Ny fahafahan'ity milina ity dia midika fa ny H&S dia afaka mitondra hevitra vaovao amin'ny famolavolana sy faran'ny fanjaitra. Ary noho io fahalalahana vaovao io, nanomboka nanadihady ny fomba hahatongavana ho tsara kokoa izy ireo!
Ny tanjona voalohany, dia ny ilain'ny tsirairay avy amin'ny fanjaitra - ho matanjaka kokoa! Ny fitaovana vaovao dia afaka miara-miasa sy mamolavola fitaovana hafakely kokoa, ary noho izany ny fanjaitra vaovao dia namboarina avy amina fitaovana izay efa saika 1/3 mafy noho ny teo aloha.
Ary avy eo, ny famolavolana… Betsaka no namboarina tamin'ny fanjaitra "indroa roa" Marina mihitsy fa ny fanjaitra dobera avo roa heny noho ny fanjaitra tokana. Na izany aza, ny maha-taper double dia tsy misy antoka manome fahombiazana. Nianatra ny H&S fa ny teboka iray izay "manafoana ny hoso-doko" amin'ny fanjaitra no tena manakiana. Ho an'ny asa antsipiriany, io no nihaonan'ny roa tonta.
H&S dia nanao fandalinana tamin'ny taona 2018 tamin'ny halavan'ny lamba, zoro ary ny fomba fanamboarana fanjaitra eo anelanelan'ny roa tonta. Taorian'ny prototypes maro, ary be ny fotoana niarahana niasa tamin'ny mpanakanto, dia nisy fanombanana vaovao nohatsaraina natao ho an'ny habe rehetra avy amin'ny 0.15mm ka hatramin'ny 0.6mm.
Ny H&S koa dia nanararaotra ny fampahafantarana ny marika fanondro eo amin'ny lamosina ho mora takarina, araka ny hitanao amin'ny sary. Ireo nozzles ankehitriny koa dia mitondra ny fomba tsotra mitovy amin'izany.
Ny valin-kafatra momba ny fanjaitra vaovao dia ny zava-drehetra nokendren'ny H&S - fifehezana bebe kokoa amin'ny antsipirihany, tsipika tsara kokoa ary ny fanatanjahan-tena tsara kokoa amin'ny alàlan'ny valan-jotra. Izy ireo dia tsy dia mora resahina loatra ary noho ny lozisialy fanovana sy nohavaozina kokoa, mahery vaika kokoa noho ireo doka teo aloha.
Tsy misy lahatsoratra mifandraika.